पत्रकारको नपच्ने प्रबृति !	मंसिर ४, २०६८ अर्थात नोभेम्बर २०, २०११
त्यसपछि एउटा पत्रकार सम्मेलनको निम्तो थियो एलिनास बेकरी क्याफेमा । ललितपुरमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको खेलकूल महोत्सवको तयारीबारेको सम्मेलनमा पत्रकार मित्रहरुसँग भेट भयो । सम्मेलनको विषयभन्दा फरक विषयमा हाम्रो कुरा भयो । सातदोबाटोको आत्महत्या काण्डको समाचार हालेको भनेर नयाँ सडक हातमा दिए मित्रले । यसबारे फलोप कस्तो छ सोधे । साथै अमृत तिमिल्सिना, सविन शर्मा, पूर्णिसंह बराइली, सिबि अधिकारी, अन्जली रम्तेल, गोमा पाण्डे, ज्ञानप्रसाद पौडेल, साइला तामाङलगायत सँग भेटघाट भयो । कार्यक्रमा एक राष्ट्रिय दैनिक तीन पत्रकारसमेत सो सम्मेलनमा उपस्थित थिए । नजिकैका पत्रकार मित्रले यसबारे कुरा काटिहाले । उनी भन्दै थिए ‘कुन चाहिले पत्रकार भेलाको नाममा पत्रकार खर्च पचाए ।’
आजको भेटघाट निकै उत्कृष्टपनि छ । किनभने भूकम्पविद्का रुपमा नाम कमाएका सुर्यनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मुर्तिकारका रुपमा विश्वभर नाम कमाएका पूथ्वीनारायण श्रेष्ठ, पोखराका वरिष्ठ एमाले नेता शंकरनारायण श्रेष्ठ आफ्नै मामा ससुरा पो परेछन् । भेटघाट भयो । मेरो पेशागत यात्राको सोध्ने कार्यपनि भयो । जे होस् पिइयो । रमाइयो । मामासँगको पहिलो भेटको साइनोलाई स्मरणीय बनाउने मौका त्यसै छोडिएन ।
आजको दिनलाई लेख्न सकिँदैन की भन्ने लागेको थियो । किनभने लागेका अनुभुतिमा शब्दहरु जापानी रेलको गतिमा दु्रत छन् । बिचरा छोराछोरी भने गृहकार्यमा व्यस्त छन् । अनि सिकाउँदै व्यस्त सुनिता । म भने आँखा खोल्न सक्ने अवस्थामै छैन । हुन त मलाई लागेको छैन । मलाई थाहा छ । एकपटक मुर्तियातिरको लामो यात्रा गर्दा पिउने समूहले भनेका थिए ।
This entry was posted on नोभेम्बर 20, 2011 at 4:08 अपराह्न and is filed under दैनिकी, म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: पत्रकार	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.